भक्तपुर घटना यतिसम्म भएको रहेछ ! जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
भक्तपुर घटना यतिसम्म भएको रहेछ !
काठमाडौ । पत्नी र छोरालाई धा’रि’लो ह’ति’या’रको प्रयोग गरेको दुई दिनसम्म उनले छ’ट’प’टा’ह’टमा समय बिताएका थिए । उनले मोबाइल समेत स्वीच अफ गराइदिएका थिए । त्यसपछि आफूले पनि ‘आ’त्म’ह’त्या’ गरेका थिए ।
भक्तपुरमा एकै परिवारको तीनजनाको ‘श’व’ भेटिएको घटनामा मुख्य दोषी मृ’तक सुदीप अधिकारी नै रहेको प्रहरी लगभग निष्कर्षमा पुगेको छ । पो’ष्ट’मा’र्ट’म रि’पो’र्टले पनि सुदीपकी पत्नी सम्झना अधिकारी र छोरा सुशान्त अधिकारीको ‘धा’रि’लो’ ‘ह’ति’या”र ‘प्र’हा’र’बाट ‘ह’त्या’ भएको देखाएको प्रहरीले जनाएको छ । पत्नी र छोराको ‘ह’त्या’ भएको दुई दिनपछि सुदीपको ‘आ’त्म’ह’त्या’ देखिएको छ ।
सुदीपले छोरा सुशान्तको ‘घाँ’टी’ ‘रे’टे”र टा’उकोमा पटक पटक ‘धा’रि’लो’ ‘ह’ति’या’र’ले ‘प्र’हा’र’ गरेको अनुसन्धान र ‘पो’ष्ट’मा’र्ट’म’ ‘रि’पो’र्ट’बाट पत्ता लागेको छ । उनले त्यसपछि ‘प’त्नी’को ”ह’त्या” गरेका थिए । घरनजिकैको धानबारीमा ‘स’ल्फ’स’ ‘वि’ष’को दुईवटा ‘ब’ट्टा’ ‘समेत भेटिएबाट उनले ‘आ’त्म’ह’त्या’का लाग सोही ‘वि’षा’दी’ प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
सुदीपले २३ भाद्रमा ‘प’त्नी र छोराको ‘ह’त्या’ गरेका थिए । ‘ह’त्या’को दुई दिनपछि दुवैजनाको मोबाइल स्वीच अफ गरिदिएका थिए । ‘पो’ष्ट’मा’र्ट’म’मा सुदीपले २५ भाद्रको विहान तिर ‘आ’त्म’ह’त्या’ गरेको देखिएको छ । २६ भाद्रमा मात्र घटनाबारे जानकारी भएको थियो । उनको आफन्त घरमा पुग्दा ‘वि’भ’त्स’ घटना देखी प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । चार दिन अघि ‘ह’त्या’ भएकाले ‘प’त्नी’ र छोराको ‘श’व’ ‘ग”न्हा’इ’स’के’को थियो । सुदीपको ‘श’व’ ‘भने सग्लै थियो ।
कुकुरको ‘श’व’ पनि केही ‘स’डे’को अवस्थामा रहेकाले सबैभन्दा पहिलो कुकुरको ‘ह’त्या’ भएको अनुमान गरिएको छ । सीसीटीभी फुटेजबाट थिमीको निकोसेरास्थित उनको घरमा अन्य कोही व्यक्ति पसेको या निस्किएको नदेखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
तीनजनाको सानो परिवार भएपनि सुदीप र सम्झनाबीच ‘झ’ग’डा’ भइरहन्थ्यो । पारिवारिक ‘क’ल’हबारे छिमेकीले समेत प्रहरीलाई बयानका क्रममा भनेका छन् । सुदीप ऋणमा समेत थिए । पसल थियो । एक वर्ष अघि उनी जागिर गुमाउन पुगेका थिए । यसको कारण ‘म’द्य’पा’न’ गर्ने बानी कारण थियो । कृषि विकास बैंक र ससुरालीको गरी उनी २५ लाख ऋणमा थिए ।
छोरा सुशास्तले यसै वर्ष एसइइ पास गरेका थिए । कलेज भर्नाको प्रक्रियामा थिए । २२ भाद्र सम्म सुदीपले पसल खोलेका थिए । घटनामा ३६ वर्षीय सुदिप अधिकारी, उनकी पत्नी ३४ वर्षीया सम्झना अधिकारी र १५ वर्षीय छोरा सुशान्त अधिकारीको ‘श’व’ ‘घ’र’मै’ फेला परेको थियो । हरेक तल्लामा एउटा कोठा रहेको र तीनवटा ‘श’व’ तीनवटा अलग तल्लामा भेटिएको थियो ।